Isitudiyo esizimele imizuzu eyi-10 ukusuka ku-Annecy nemizuzu engama-40 ukusuka eqhweni - I-Airbnb
Isitudiyo esizimele imizuzu eyi-10 ukusuka ku-Annecy nemizuzu engama-40 ukusuka eqhweni
I-ikhaya ephelele ibungazwe ngu-Sandrine
I-studio itholakala phansi phansi kwendlu yethu ilungiswe ngokuphelele ngo-2018. Ngomnyango wangasese, uzimele ngokuphelele. Ukufinyelela engadini yethu, ukupaka okulula kwemoto eyodwa, ukuba seduze kwezitolo, imizuzu eyi-15 ngemoto usuka eLake Annecy.
I-studio ifakwe umbhede ophindwe kabili, i-TV, i-Wifi, indlu yokugezela, ikhishi elifakiwe: usinki, i-hob kagesi, ifriji, i-microwave, umenzi wekhofi we-Senseo ... Itafula elincane elitholakala engadini. Ungakwazi ukupaka imoto yakho egcekeni lendlu, 2 izinyathelo ukusuka emnyango studio.
4.85 · 71 okushiwo abanye
Indlu yethu itholakala e-Villaz, idolobhana elinombono omuhle wezintaba, elise-15 imizuzu ukusuka e-Annecy, imizuzu engu-40 ukusuka ezindaweni zokungcebeleka eqhweni (Grand Bornand, La Clusaz, the Glières plateau), imizuzu engama-30 ukusuka eGeneva.
Zonke izitolo zifinyeleleka kungakapheli imizuzu emi-5 ngezinyawo usuka endlini: I-Carrefour Express ivula izinsuku ezingu-7 ngesonto, amabhikawozi, ibhusha, ubisi lukashizi, ibhange, ikhemisi, ugwayi / umshini wokunyathelisa, isikhungo sezokwelapha ...
Kuyinto enhle ukusizakala yonke imisebenzi esifundeni, kokubili ebusika (ekwehleni Ukushushuluza, unqamule izwe, Sledding ...) futhi ehlobo (ngokuqombola izintaba, ukubhukuda e Lake Annecy ...).
Sizojabula ukukwazi ukuxoxa nawe ngemisebenzi yesifunda.